Lovelyz အဖွဲ့ဝင် Mijoo ကို လှတယ်လို့ ချီးမွမ်းခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Kai | Asia News Bar
Lovelyz အဖွဲ့ဝင် Mijoo ကို လှတယ်လို့ ချီးမွမ်းခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Kai
Kai ဟာ လက်ရှိမှာ Varity show တွေအများကြီး ရိုက်ကူးနေတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလည်း Sixth Sense2မှာ Guest အဖြစ်သွားရောက်ပြီး ထို show က Cast တွေနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
ဒီ Show မှာ ပါတဲ့လူအကုန်လုံးက Charisma အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းသမားတွေမို့ Kai နဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ Cast တွေထဲက Lovelyz အဖွဲ့ဝင် Mijoo ကတော့ Kai နဲ့ “Amazing Saturday” Varity Show မှာ တွေ့ဆုံဖူးပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး team တစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီး အတူတွဲဆော့ခဲ့ကြတာပါ။
ခု ဒီ six sensth ရဲ့ အဖွင့်မှာ Yoo Jae suk က ခုလို မေးခဲ့ပါတယ်။ “Mijoo နဲ့ Kai က varity show တခုကို အတူတူတွဲလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆို … အာ့တာဘယ်လိုနေလည်း ??” Kai ကတော့ Mijoo ဘယ်လို ခံစားရကြောင်း သိချင်မိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Mijoo ကတော့ ရှက်ပြီး မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် ပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
Jessi က ချက်ချင်းဆိုသလို “Ah… Mijoo က ထူးဆန်းတာတွေ လုပ်နေတာဘဲ” ဆိုပြီး သူမအမူအရာကို မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Kai ကတော့ Mijoo ခုလိုလုပ်ပြနေတာတွေကို “သူမက မလှပဖူးလား?? သူမရဲ့ duality က နှစ်လို့ဖွယ်ကောင်းပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
Mijoo က ပိုပြီး ရှက်သွေးဖြန်းသွားပြီး သူမခြေထောက်ကို ရှေ့ထုတ်ကာ ဂနာမငြိမ်စွာနဲ့ လှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ Jessi က တော့ Mijoo ကို “ရှက်ပြနေတာတွေ ရပ်လို့ရမလား… သူက မြှောက်ပြောနေတာဟဲ့” ဆိုပြီး ရီပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။Kai နဲ့ Mijoo ကြားက reaction တွေက အစပိုင်းတော့ ရင်ခုန်စရာကောင်းခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျ ရီစရာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Kai က သူ့ team အတွက် member ရွေးချယ်ရမဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Kai မရွေးခင်မှာ မင်းသား Lee Sang Yeob က “Kai က သာ Mijoo ကို မရွေးချယ်ဖြစ်ရင်တော့ကွာ တကယ်ရီရမှာဘဲ” လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လည်း ငဂျစ်လေး Kai က သူ့ အသင်းဖော်အတွက် Mijoo ကိုမရွေးဘဲ တခြားသူရွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံး ရယ်ပွဲကျခဲ့ရပါတယ်။
Next ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောင်တအရဆုံးအကြောင်းကိုပြောရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့ Zitao »
Previous « တစ်နိုင်ငံလုံးကချစ်လွန်းလို့ Nation title ဆုတွေ ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတဲ့ Korean အနုပညာရှင်(၁၂) ယောက်
မကြာခင်မှာစစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးပြီး ပရိတ်သတ်ရှေ့ကို ပြန်ရောက်လာတော့မယ် D.O.
ပထမဆုံး solo concert မှာ EXO အတွက် spoiler ပေးခဲ့တဲ့ Baekhyun
အခြေကျပြီး ကလေးလိုချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ပြောလာခဲ့တဲ့ Jessi
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို အနုအရွပုံစံနဲ့ရော ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံနဲ့ရော ဖမ်းစားမဲ့ 2PM ရဲ့ Music Video အသစ်